ဆန်နီနေမင်း: ဓမ္မမှတ်စု အပိုင်း(၃)
ကျောက်ခဲသည် သေးသည်ဖြစ်စေ၊ ကြီးသည်ဖြစ်စေ ရေထဲပစ်ချလျှင် နစ်မြုပ်တတ်သကဲ့သို့ အကုသိုလ်ကံသည်လည်း သေးသေးဖြစ်စေ၊ ကြီးကြီဖြစ်စေ ပြုလုပ်သူအား အပါယ်သို့ ဆွဲချတတ်သည်သာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူတစ်ပါး သိသည်ဖြစ်စေ၊ မသိသည်ဖြစ်စေ မကောင်းမှုမှန်သမျှကို မပြုလုပ်သင့်ပေ။ (မေတ္တာရှင်-ရွှေပြည်သာ)
Stone small or big happens to sink in the water, so also demeritorious deed small or big pulls the one who acts it to the woeful states. Therefore, one should not do all evil actions known or unknown. (Mettāshin-Shwepyithar)
Posted by ဆန်နီနေမင်း at 8:53 AM